N'ihi Gịnị Ka A Ga-eji Nwee Nnọọ Oké Nkịtị? | Martech Zone
Enwere nwatakịrị ọhụrụ na ngọngọ n'akụkụ akụkụ nke azụmahịa, Oké arụmụka. Ebumnuche nke ọrụ a pụtara ìhè - nye nchekwa nchekwa etiti iji soro ihe ndị ọbịa gị kwuru, gbasaa nkọwa karịrị blog gị, ma nyekwa ọgaranya bara ọgaranya iji gosipụta nkwupụta ahụ.
Ọ bụghị dị ka ihe dị mkpa mana ka nsogbu bụ nkwa ahụ sitere na Mkparịta ụka siri ike na ị nwere ike ibupụ echiche gị ma ọ bụrụ na ị kpebie ịhapụ ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ ọgwụ siri ike ilo… ọkachasị ma ọ bụrụ na ha hapụ ọrụ ha ma mechie saịtị ahụ.
Tags: Ndị edemede 2adminndị edemede kwa postnhichandị na -agụ akwụkwọkpọmkwem okporo ụzọEolsonmmemme nkwalitendị na-achị achịanataraahịa omume nkwaMichael StelznerSliderwordpress ngalaba-ede akwụkwọwordPress coauthorswordpress otutu ndi dere
Jenụwarị 20, 2008 na 9:21 PM
Ọ bụ ụdị echiche na-adọrọ mmasị… na-ezipụ ihe ị na-ekwu na ọrụ ọzọ. Ga-enyere aka na nsogbu spam. Na-eme ka m chee ihe ọzọ ị nwere ike ịbụ "outsource" na blọọgụ gị (yana n'akụkụ ntụgharị, ụdị ọrụ ntanetị ọhụụ enwere ike ịnye).
Ha Alexa okporo ụzọ akụkọ ihe mere eme na-egosi di na nwunye isi spikes. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ma ọrụ a nwere ike itolite ma jikwa ọchịchọ na-arịwanye elu. Dị ka ọ dị na ọtụtụ ụdị wijetị ụdị ọrụ, ọ bụrụ na ha etolite ọsọ ọsọ ma ghara ịnagide ibu ahụ, ha na-eme ka blọọgụ ha niile rụọ ọrụ nwayọ na ndị ọrụ nwere ike ịwụli ụgbọ mmiri.
Jul 21, 2008 na 5:36 PM
Ndewo Douglas. Daalụ maka ikenye banyere IntenseDebate. Ọ ga-amasị m ileba anya n’ihe ụfọdụ na-echegbu gị. IntenseDebate na-enye onye na-ebupụ ahịa maka WordPress nke na-etinye okwu gị ozugbo na sistemụ ikwu okwu nke WordPress.
N'ihe banyere itinye ihe emere na IntenseDebate ozugbo na okwu WordPress gị dị ka nkwado ndabere, ndenye aha na API anyị (kwa okwu Noa n'elu), anyị nwere ụfọdụ nnukwu atụmatụ na-agbadata n'obere oge! Enweghị m ike ịwụfu agwa ndị ahụ n'ihu ọha (ọ bụ ezie na echere m na m mere), mana ka anyị kwuo na a ga-ekpuchi ndepụta ndepụta gị niile yana ụda nke atụmatụ ndị ọzọ dị egwu.
Anyị na-achọ beta testers maka anyị na-abịa WordPress ngwa mgbakwunye version 2.0. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere atụmatụ ndị dị egwu gụnyere na nke a na ịbanye na ndepụta beta biko zitere m ozi na Nkwado@intensedebate.com. Ọ ga-amasị m ịnweta gị site na iji IntenseDebate.